कोषको रकम दुरुपयोगको आशंकामा दूतावास माथि अख्तियारको छानविन
२०७३ भदौ १२ आइतबार, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारबाट उठाइएको कल्याणकारी कोषको रकम विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट दुरुपयोग भइरहेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गत कामदार कल्याणकारी कोषअन्तर्गतको रकम समस्यामा परेका र मृत्यु भएका कामदारको उद्धारका लागि भन्दै बोर्डले दूतावासलाई दिए पनि कामदारको करोडौँ रुपैयाँको हिसाबकिताब गोलमाल गरिएको अनुमान गरिएको छ । दूतावासले करोडौँ रुपैयाँको पेस्की फछ्र्यौट नगरेको तथा ... बाँकी अंश»
बाँदरले आतङ्क मच्चाएपछि अन्नबाली छोड्दै कृषक
२०७३ भदौ १२ आइतबार, पाल्पा। बाँदरको आतङ्कबाट पीडित ग्रामीण भेगमा कृषक अन्नबाली छोडी व्यावसायिक रुपमा कागती खेती गर्न थालेका छन् । मकै, गहुँ, तरकारीलगायत खेतीमा बाँदरले नोक्सान पुर्‍याएकाले उनीहरुले व्यावसायिक रुपमा कागती खेती सुरु गरेका हुन् । देउरालीका कृषक कृष्णप्रसाद गौतमले बारीमा एक सयभन्दा बढी कागतीको बिरुवा लगाएका छन् । उनले मकै र अन्य तरकारी खेती छाडेर यस वर्षदेखि कागती खेती सुरु गरेका हुन् । छहरा अम्लाबासका कृषक बोधराज पोखरेलले पनि अन्य फलफूल खेत ... बाँकी अंश»
धौलागिरीमा ५० सहकारी खारेज १२ एकीकरण
२०७३ भदौ १२ आइतबार, बागलुङ। पछिल्लो एक दशकको अवधिमा धौलागिरि अञ्चलका ५० सहकारी खारेजीमा परेका छन्। डिभिजन सहकारी कार्यालय, बागलुङको तथ्याङ्क अनुसार बागलुङमा २५ सहकारी खारेजीमा परेका हुन्। त्यसैगरी पर्वतमा १८, म्याग्दीमा ५ र हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा १ वटा गरी कुल ५० वटा सहकारी खारेजीमा परेका हुन। नियमित कारोबार नगरी निस्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाहरु खारेजीमा परेको डिभिजन सहकारी कार्यालय बागलुङ प्रमुख विष्णु प्रसाद शर्माले बताए। सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत ... बाँकी अंश»
हेटौँडा– ढल्केबर प्रसारण लाइन चार महिनाभित्र सम्पन्न हुने
२०७३ भदौ ११ शनिबार, काठमाडौँ । लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको ढल्केबर– इनरुवा र हेटौँडा– ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रियाले गति लिने भएको छ । सरकारले गत साउन ३२ गते वनक्षेत्र प्रयोगका लागि सहज रुपमा मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि सो प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन लागेको हो । कुल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने विषयमा नै सबैभन्दा बढी विवाद रहँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ३२ गत ... बाँकी अंश»
यसरी हुन्छ सेरामिक्स माटोको आयात
२०७३ भदौ ११ शनिबार, काठमाडौँ। जो कोहीले नपत्याउला ! कतै माटोपनि भन्सार तिरेर आयात गरिन्छ । तर, त्यसो होइन सेरामिक्स उद्योगमा प्रयोग हुने माटो भन्सार तिरेर आयात गर्नु बाध्यता बन्दै गएको छ । आधुनिक सेरामिक्सका सामान बनाउन प्रयोग गरिने माटो भारतबाट ल्याउनुपर्छ । भारतबाट आयात हुने उक्त माटो खरिद गर्दा व्यापारीले लगभग २४ प्रतिशत कर र भ्याट तिर्नुपर्छ । आधुनिक र अत्याधुनिक सेरामिक्स उद्योग यहाँ नगन्य मात्र रहेकाले यहाँ सालिन्दा माटोबाट तयारी समानको आयात बढेको छ । ... बाँकी अंश»
ग्रामिण क्षेत्रको पहुँचमा सहकारी, बर्षिक नाफा झण्डै डेढ करोड
२०७३ भदौ ११ शनिबार, स्याङ्जा। मुलुककै उत्कृष्ट बन्ने होडमा रहेको स्याङ्जाको वालिङमा रहेको उपकार वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ मा झण्डै १ करोड ५० लाख मुनाफा गरेको छ । उपकार सहकारीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद अर्याल, उपाध्यक्ष लक्ष्मीपती पौडेल र सचिव दिपेन्द्र गैह्रेद्धारा हस्ताक्षरीत प्रेस विज्ञप्ती मार्फत संस्थाले गएको आर्थिक बर्षमा १ करोड २९ लाख ४२ हजार ६ सय ३८ रुपैया खुद मुनाफा गरेको जनाएको हो । उपकार सहकारीमा हाल २०७३ असार मसान्त सम् ... बाँकी अंश»
तथ्याङ्कमा हेर्नुहोस् मनै रुवाउने आर्थिक बृद्धिदरको चित्र
२०७३ भदौ १० शुक्रबार, काठमाडौं । कुनैपनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ नभएसम्म त्यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । खाली पेटमा राष्ट्रियताको नारा बोकेर कोहीपनि व्यक्ति हिँड्दैन भन्ने मान्यता अहिले पनि यत्रतत्र सर्वत्र प्रचारप्रसार गरिरहनु आवश्यक नहोला । तर, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेरेर अन्य छिमेकी मुलुकको आर्थिक विकासको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आज जो कोही राष्ट्रवादी नेपालीले पनि अहिलेका राजनीतिक दलको बहुलठ्ठीपनालाई हे ... बाँकी अंश»
मूल्य वृद्धिदर उच्च, मुद्रास्फीति बढ्यो : राष्ट्र बैंक
२०७३ भदौ १० शुक्रबार, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ९.९ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । तराई आन्दोलन, सीमा–नाका अवरोध र आपूर्ति असहजताजस्ता प्रतिकूल परिस्थितिका कारण मूल्यमा चाप परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७३ असार महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति १०.४ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ७.२ प्रतिशत रहेको थियो । समीक ... बाँकी अंश»
खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन दसैँ अगावै सम्पन्न हुने
२०७३ भदौ १० शुक्रबार, काठमाडौँ। खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइन आगामी डेढ महिनाभित्र सम्पन्न हुने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्राधिकरणका प्रसारण लाइन निर्देशनालयका प्रमुख कनहैया मानन्धर र आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले आगामी दसैँ अगावै प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुने विश्वास दिलाए। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका– ९ र भद्रकाली गाविसकोबीचमा तीन वटा ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हाल करिब १०० मजदुर परिचालित छन् । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रसा ... बाँकी अंश»
कृषिमा आधारित रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता : उद्योगमन्त्री
२०७३ भदौ १० शुक्रबार, काठमाडौँ । नवनियुक्त उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले समुदायमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तथा नीति तयार गर्ने बताएका छन् । शपथ लिइसकेपछि आज मन्त्रालयमा आयोजित पदस्थापन कार्यक्रममा उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन जोड दिए। जोशीले भने – “जनताले अनुभूति गर्नेगरी सेवा प्रदान गर्नुपर्छ, उनीहरुले पाउने सुविधामा कमी आउनु भएन ।” मन्त्री जोशीले कर्मचारीले अगाडि बढाएका विषय ... बाँकी अंश»
नियमित कर नतिर्नेलाई कारबाही गर्न विभागलाई सकस, महत्वाकांक्षी लक्ष्य सधैं फ्लप !
२०७३ भदौ ९ बिहिबार, काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ सालमा आफ्नो कार्यालयमा भ्याटमा दर्ता भएर नियमित रूपमा कर नतिर्ने करदाताहरूको संख्या वर्षेनी घटाउँदै लैजाने लक्ष्य लियो । २०७०÷७१ सालको वार्षिक कार्ययोजना बनाउने उद्देश्य सहित जारी भएको गोदावरी घोषणापत्र २०७१मा यसरी दर्ता भएर पनि वर्षाैसम्म कर नतिर्ने करदाता (ननफाईलर)को संख्या घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लियो । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्ला ३१ प्रतिशतमा रहेको नन फाईलरको संख्या बढेर ३ ... बाँकी अंश»
प्राधिकरणले आठ करोड सत्तरी लाख बक्यौता उठाउन बाँकी
२०७३ भदौ ९ बिहिबार, लुम्बिनी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले रु आठ करोड ७० लाख बक्यौता उठाउनुपर्ने देखिएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउनेमा भैरहवा भन्सार कार्यालय, महेन्द्र सभागृह, कृषि सेवा केन्द्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गौतमबुद्ध विमानस्थल, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कर्मचारी मिलन केन्द्रलगायतका रहेका छन् । त्यसबाहेक निजी स्वामित्वमा रहेका उद्योग तथा आम उप ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ ९ बिहिबार, काठमाडौँ। सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सिएमइसी)ले नेपालको दुई महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्न चासो देखाएको छ। सो कम्पनीले तामाकोसी तेस्रो र तमोर जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आफू तयार रहेको भन्दै सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । नर्वेजियन कम्पनी एसएन पावरले बजार नभएको भन्दै छाडेको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६५० मेगावाट रहेको छ। यस्तै ७६२ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् आ ... बाँकी अंश»
उपत्यकामा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य : केवलकारमा चन्द्रागिरि (तस्वीर सहित)
२०७३ भदौ ८ बुधबार, काठमाडौ । राजधानीको धुवाँ धुलो र व्यस्तताबाट केहि फरकपन र फ्रेस अनुभुतिका लागि एउटा नयाँ गन्तव्य बनेको छ चन्द्रागिरि । थानकोटको गोदामबाट करिब ३ घण्टाको उकालो हिडे पछि पुगिने चन्द्रागिरि अब ८ मिनेटमा पुगिने छ । काठमाडौं उपत्यकामा घुम्ने स्थानको अभाव भएको केही समयदेखि यहाँका बासिन्दाले महशुस गर्न थालेका थिए। उक्त अभावलाई परिपुर्तीगर्नकालागि चन्द्रागिरि एक उचित गन्तव्य बन्ने भएको छ। चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले थानकोटदेखि चन्द ... बाँकी अंश»
जगदम्बा स्टिल्सले नेपाली बजारमा ल्यायो राइनो ५००डी फलामे छड
२०७३ भदौ ८ बुधबार, काठमाडौं । ७ सय मिलियन अमेरिकी डलर कारोबार रहेको शंकर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्स प्रालिले नेपाली बजारमा ‘ग्यारेण्टेड डक्टिलिटी’ सहितको राइनो ५००डी फलामे छड सार्वजनिक गरेको छ । राइनो ५००डी मजबुती तथा डक्टिलिटी सहितको नयाँ छड हो । उत्पादन प्रक्रिया, भौतिक तथा रसायनिक गुणको सम्मिश्रण लगायत कारणले यो छड बजारमा उपलब्ध अन्य उत्पादन भन्दा विशेष र पृथक रहेको कम्पनिले जनाएको छ । ग्रेड एफई ५०० डीमा कम्पनीले सल्फर र फोसफोरसको सम्मिश्रणको अध ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ ८ बुधबार, भक्तपुर। केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा लागेको एक महिने मेलामा रु एक करोड ६० लाख २२ हजार भेटी सङ्कलन भएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका सिपाडोलस्थित सो मन्दिरमा यही भदौ ६ गतेसम्म सञ्चालन भएको एक महिने साउने मेलामा रु १४ लाख खर्च भएको जानकारी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण थापाले दिए। मेलामा एक दाताले रु १५ लाख मूल्य बराबरको एक रोपनी जग्गा दान गर्ने घोषणा पनि गरेको उनले बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण थ ... बाँकी अंश»
फोजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउदै एनसेल
२०७३ भदौ ८ बुधबार, काठमाडौं। ईन्टरनेट सेवाको माग र ग्राहक संख्या बढिरेको अहिलेको अवस्थामा एनसेलले यो वर्ष आफुले डाटा सेवामा विषेश ध्यान दिने जनाएको छ। एनसेलद्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक साईमन पर्किन्सले उक्त कुरा बताएका हुन्। पर्किन्सले भने, ‘यो वर्ष डाटा सेवामा थप सुधार गर्नु कम्पनीको पहिलो प्राथमिकता हो।’ अहिले फोरजी व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ। यही विषयमा बोल्दै पार्किन्सले नियमक निकायको अनुमति पश्चात कम् ... बाँकी अंश»
चौथो पटक सर्वोत्कृष्ट करदाता बन्दै एनसेल
२०७३ भदौ ८ बुधबार, काठमाडौ। निजी क्षेत्रको मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल चौथो पटक देशको सबै भन्दा ठूलो करदाता बन्ने निश्चित प्राय भएको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा रु २८ अर्व भन्दा बढि राजश्व सरकारलाई बुझाएको छ। यस अघि आर्थिक वर्ष २०६९-२०७०, २०७०-२०७१ र २०७१-२०७२ मा सबै भन्दा बढि कर तिर्दै एनसेलले लगातार तीन पटक सर्वश्रेष्ठ करदाता बनिसकेको छ। यद्यपी सम्बन्धित कर कार्यलयबाट भने कुन कुन कम्पनी अथवा करदाता आव. २०७२-७३ को उत्कृष्ट करदाता ... बाँकी अंश»
बुढीगण्डकीको नाममा जनताकाे तर्फबाट एक अर्ब ६७ करोड
२०७३ भदौ ७ मंगलबार, काठमाडौं । सरकारले यसै वर्षदेखि लगाएको पूर्वाधार विकास करबाट मात्रै साढे दुई महिनामा डेढ अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । जेठ १५ गतेदेखि नै लागूहुने गरी सरकारले लगाएको उक्त करमा साउन मसान्तसम्म मात्रै १ अर्ब ६७ कराढ ६८ लाख रूपैयाँ संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार पहिलो १६ दिन अर्थात् जेठ मसान्तसम्म नै झण्डै ४३ करोड रूपैयाँ संकलन भएको उक्त करमा असार मसान्तसम्म १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गत ... बाँकी अंश»
खाद्यको टोलीद्वारा सिलबन्दी सहित ५ उद्योगमा कारबाही
२०७३ भदौ ७ मंगलबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय बजार अनुगमनमा सक्रिय रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले सोमबार राजधानीका पानी, मिठाई र डेरी गरी ५ उद्योगमा अनुगमन गरेको छ । जसबाट काठमाडौंको जीतपुर फेदीमा रहेको ग्ल्यासियर मिनेरल वाटर प्रा.लि.मा विभागको टोलीले सिलबन्दी गरेको छ । उक्त उद्योगमा जारको लेवलमा ग्ल्यासियर मिनेरल वाटर प्रा.लि.लेखिएको र सिंक र्‌‍यापमा एम.डि.नेचुरल फूड एण्ड बेभरेज पा.लि. तार्केश्वर न.पा., काठमाण्डौ लेखिएको पाइएको विभागका प ... बाँकी अंश»